I-Semalt: Ugaxekile Wokudlulisa I-Google Analytics. Umthombo Nenhloso Yalo.
Ugaxekile kuma-akhawunti we-Google Analytics inkinga evamile kulezi zinsuku ezihlala zikhona ngamafomu amabili ahlukene: ukuxhunyelwa kogaxekile ku-bot kanye nogaxekile wokudlulisela. U-Ryan Johnson, i-10 (Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, uthi ukuxhunyelwa kogaxekile kwebhodi kungumqoqo we-bots wangempela ovakashela iwebhusayithi yakho noma ibhulogi, okwenza i-Google Analytics ibale imininingwane yayo yokudlulisela. I-spam yokudluliselwa koghost iqoqo le-bots elidlula i-website bese ishaya amaseva we-Google Analytics ngokuqondile. Ababoni ngempela ukuvakashela iwebhusayithi yakho, futhi bakhohlisa i-Google Analytics ukubala ukubukwa kwekhasi kanye nezikhathi. Ngakho-ke, lezi zigaba ezimbili zihlukile komunye nomunye, kodwa zombili zingalimaza idatha yakho ye-analytics ngezinga elithile.
Ingabe i-spam yokudlulisa i-spam ingahle ilimaze amawebhusayithi ethu noma amabhulogi?
Okokuqala, ake ngikucacise ukuthi u-spammers wokudlulisa i-Google Analytics kwenzeka lapho abaduni noma abagaxekile bezama ukuthumela idatha engalungile kuma-akhawunti akho we-Google Analytics. Basebenzisa izinqubo ezithile zokulinganisa ukwenza lesi senzo futhi baqoqe amakheli e-IP wenani elikhulu labantu. Bavame ukuthumela ukubuka kwekhasi lamanga ku-akhawunti ye-Google Analytics ngosizo lwe-ID yakho yokulandelela ye-UA, ukuwagcwalisa ngolwazi lokudlulisela amawebhusayithi nama-blogs aphansi.
Umgomo wabagaxekile nabaqashi ukukwenza uchofoze izixhumanisi zabo ezihambisanayo futhi udale iningi lemali ezivela ezikhangisweni zabo..Banikeza ngezinsizakalo ezincane noma bakucindezele ukuthi uye emakhasini asolisayo noma aphethwe yizifo. Okukhethwa kukho akuyona ukuvakashela amawebhusayithi e-spammer noma amabhulogi uma ufuna ukuqinisekisa ukuphepha nokuvikelwa kwakho.
Ingabe ugaxekile we-Google Analytics?
Azikho izihluku eziqondile kuwebhusayithi yakho, ngaphandle kwemali encane ye-hits oyitholayo nsuku zonke. Futhi, ama-bots angena kumaseva, futhi amasu we-SEO angeke akusize ukuwavimba unomphela. Abakwa-spammers nabaduni abafuni lutho ngaphandle kokubeka amasayithi abo kumiphumela yokusesha injini bese bexosha amakhasi akho ewebhu ngemuva komncintiswano. Ngakho-ke, abanalo lutho mayelana nesayithi lakho kuze kube yilapho bengenqume ukweba ulwazi lwakho lomuntu siqu.
Ingabe kuyisimoto sangempela?
Ukuze nje kucace, i-Google Analytics spam yokudlulisa akuyona ithrafikhi yangempela. Amadoda ngemuva kwalokhu akakaze avakashele iwebhusayithi yakho kodwa athumele izicelo ezifake kuma-akhawunti wakho we-analytics nge-bots abathile. Zizobonisa ohlwini lweSayithi LamaReferrer uma uhlola Ukuthola> Yonke I-Traffic> Indawo yokudluliselwa kuyo. Banda izinga lokunciphisa isayithi lakho futhi banciphise izinga lokuguqulwa kwalo. Abakwa-spammers nabaduni bavele nje benze noma iyiphi i-ID ye-UA-XXXXY-Z yokuthumela impahla futhi bathumele ama-hits noma izicelo zokubhubhisa ibhizinisi lakho kwi-inthanethi.
Yini esingayenza ukuze silwe nogaxekile we-Google Analytics spam?
Ungaqala ngezidingo ezilandelayo: iya endaweni yezilungiselelo ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics bese uchofoza ku-"Hlanganisa wonke ama-hits kusuka ku-spiders kanye ne-bots" eyaziwayo. Lesi yisinyathelo esihle kunazo zonke futhi esidume kakhulu yi-Google, futhi ungasebenzisa le ndlela ukulungisa inkinga ngemizuzwana. Ngaphandle kwalokho, ungakha izihlungi futhi ungabandakanyi abathumeleli noma uhlele ifayela lakho le-.htaccess bese ulondoloza izilungiselelo ngaphambi kokuvala iwindi.